Visitor from US is reading पछिल्लो अनुसन्धानले यौन सन्तुष्टीका बारेमा यस्तो देखायो,जुन
Visitor from RU is reading "Hello Sajha"
Visitor is reading what kind if censorship we need
Visitor from US is reading Wedding Photographer in Kathamndu, Nepal
Visitor is reading Highway - The movie
Visitor is reading yes yes wireless internet
Visitor is reading Research topic
[VIEWED 1150 TIMES]
Posted on 01-30-19 8:55 AM Reply [Subscribe]
पछिल्लो अनुसन्धानले यौन सन्तुष्टीका बारेमा यस्तो देखायो,जुन महिलालाई निकै मन पर्छ कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् ।
हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ?
अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ? भन्ने विषयमा सोधिएको थियो । उक्त अनलाइन सर्भेक्षणले केही रोचक नतिजा दिएको छ ।
झण्डै चार लाख मानिसले भाग लिएको उक्त सर्भेक्षणमा ६२ प्रतिशत महिलाहरुले सेक्सका बेला आफूलाई आफ्नो पुरुष पार्टनर अश्लील तथा छाडा भएको मन पर्ने बताए ।